> Resource> iTunes> Ebee bụ iTunes Playlist ebe?
Ebee Ka iTunes Store Ndetuta egwu ọkpụkpọ?
Nyochawa, iTunes adịghị ahụ na-echekwa listi ọkpụkpọ jidesie gị na kọmputa. The iTunes n'ọbá akwụkwọ ga-Otú ọ dị, nwere yiri ọmụma banyere listi ọkpụkpọ. Ka ihe atụ, mgbe ị na mbupụ iTunes n'ọbá akwụkwọ na mbubata ka e mesịrị, listi ọkpụkpọ ga-dị kwa.
Ya mere, ihe ị chọrọ na-eme na iTunes listi ọkpụkpọ?
>> Get Free YouTube Downloader ka Download ọ bụla YouTube vidiyo na iTunes
Ị nwere ike mbupụ ndepụta ọkpụkpọ gị dị ka ihe TXT, XML, M3U faịlụ site na-ahọpụta listi ọkpụkpọ na iji Njikwa> Library> Export Playlist.
Nhọrọ 1: Export iTunes Playlist ka M3U
The M3U playlist format mbụ e emejuputa atumatu Winamp ma ọ ugbu a na-akwado site kasị media Player dị ka Songbird, MediaMonkey, iTunes na wdg Nte ẹwụtde ke screenshot mmasị n'elu, biko họrọ M3U si Format ndọpụta ndepụta mbupụ gị iTunes playlist ka M3U.
Nhọrọ 2: Export iTunes Playlist ka PLS
N'ụzọ dị mwute, ị ga-enwe ike mbupụ gị iTunes playlist ka PLS usoro. Ma, ị ka pụrụ mbubata gị iTunes n'ọbá akwụkwọ gaa Songbird na mgbe ahụ ịzọpụta gị listi ọkpụkpọ na PLS usoro.
Zọpụta Smart Playlist ibiere
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịrụ a kpọmkwem ndabere na gị Smart Ndetuta egwu ọkpụkpọ, mgbe ahụ, m nwute na m ga-agbaji ya unu na e nweghị onye dị otú ụzọ gburugburu ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ka nwere ike na-agbalị na-arụ ọrụ ya buruburu site exporting na ọbá akwụkwọ (File Library Export Library) na library.xml faịlụ na mgbe mbubata ya (File Library Bubata Playlist). Nke a ga-oyiri na listi ọkpụkpọ, gụnyere Smart Ndetuta egwu ọkpụkpọ na ha ibiere.
Na n'elu nke, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ iTunes na Mac ma mara otú iji AppleScripts, ị pụrụ iji nke a iTunes Edemede mbupụ na ibiere nke Smart Playlist (s) na XML na mbubata ha mgbe e mesịrị.